संसारका यस्ता अनौठा विवाह : जहाँ दुलहा-दुलही कतै १ वर्षका लागि कोठामा बन्द गरीन्छ ! « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
१२ मंसिर २०७८, आईतबार ००:००
विवाह एक सामाजिक परम्परा हो । हाम्रो समाजमा विवाह सम्वन्धी मूल्यमान्यता समाज अनुसार फरक फरक हुने गर्छ । कतिपय हाम्रो समाजमा भइरहेको विवाह परम्परा हामीलाई सुन्दा अचम्म लाग्ने गर्छ ।
सर्वप्रथम यो संसारमा विवाहको सुरुवाती प्रमाण करिब ४,३५० वर्ष अघि मेसोपोटामियामा भेटिन्छ ।यहाँ पहिलो पटक कुनै पुरुष र महिलालाई एकजुट बनाउनका लागि समारोह भएको थियो ।
भारतमा पनि वैदिक कालदेखि नै विभिन्न प्रकारले विवाहको चलन चल्दै आएको छ । यहाँ विवाहसँग सम्बन्धित भारतका केही अचम्मका परम्पराबारे कुराकानी गर्दैछौं ।
१.विवाहको ठिक अघि दुलहाले सन्यास लिन जिद्दी गर्ने :
विवाह गर्ने कि नगर्ने रु यो अलमलमा त धेरै मानिसहरु पर्ने गर्छन् । तर विवाहको ठिक अघि यदि विवाहले सन्यास लिने जिद्दी गर्छन् भने के गर्ने रु अचम्म छैन त परम्परा ?तमिल ब्राह्मणको विवाहको ठिक अघि दुलहाले सन्यासी बन्ने जिद्दी गर्नुपर्ने परम्परा छ । त्यसपछि दुलहीका पिताले कुरा गर्नुपर्छ । उनलाई गृहस्थी जीवनको आवश्यकताबारे बताउँछन् र विवाहका लागि तयार गरेर मण्डपमा ल्याउँछन् ।
२. आरती र फूलले होइन, दुलहाको स्वागत गोलभेडा र गालीले :
साधारणतया जन्तीको स्वागत आरती र फूलले गर्ने गरिन्छ । तर सबैले यस्तो व्यवहार कहाँ पाउँछन् र रु भारतको उत्तर प्रदेशको सरसौलको केही आदिवासी इलाकामा दुलहा र जन्तीको स्वागत गोलभेडामार्फत् गरिन्छ ।
गोलभेडाले मात्रै होइन, उनीहरुलाई गालीसमेत गरिन्छ । यो एक तरिकाले धैर्यता मापन गर्ने तरिका हो र यसरी सुरु गरिएको सम्बन्धमा गहिराई हुने मान्यता राखिन्छ ।
३. दुलहा र दुलहीकी आमाले हेर्न पाउँदैनन् विवाह :
४. टाउकोमा भाँडा राखेर दुलहीले लिन्छिन् आशिर्वाद :
५. विवाहपछि श्रीमान् श्रीमती एक वर्षका लागि कोठामा बन्द :
६. दुलहा अघि रुख वा कुकुरसँग विवाह :
७. दुलहाको नाक र कान तान्नु :
अन्य देशका परम्परा :
– स्कटल्याण्डकामे केही इलाकामा विवाहको केही दिन अघि मोसो दलिन्छ । केही स्थानमा दुलहा-दुलहीमाथि फोहोर फ्याँक्ने गरिन्छ ।एजेन्सी
प्रकाशित मिति: Nov 28, 2021
विवाहमा धेरै जसो घटना घटने गरेको हामीले प्राय सुन्दै र देख्दै आएका छौ । प्रायजसो
जान्नुहोस् : विश्वका कुन देशमा मृत्यु सबैभन्दा सहज छ ? नेपाल कुन ग्रेडमा पर्छ ?
मानिसले जन्मसँगै मृत्युलाई पनि महत्वपूर्ण लिने गर्छन् । त्यसैले मानिसले भन्ने गर्छन् कि जसरी बाचेपनि
४५०० वर्ष पुरानो बायोइन्जिनियर्ड हाइब्रिड जनावर भेटियो , किन भए त वैज्ञानिक चिन्तित ?
हालै पुरातत्वविदले एक प्राचिन बायोइन्जिनियर्ड जनावरको कंकाल भेटेको छ । ४५०० वर्ष पुरानो बायोइन्जिनियर्ड हाइब्रिड
यस ठाउँमा किन विगत सय वर्षदेखि कालगतिले कसैको मृत्यु भएको छैन त ? थाहापाउनुहोस्!
विश्वका यस्ता रहस्यम ठाउँहरु छन् जुन हामीले सुनेका र देखेका पनि छैनौ । विश्वमा यस्ता
तुर्कमेनिस्तानका राष्ट्रपतिले ‘नर्कको ढोका’ निभाउने भनेपछि …!
तुर्कमेनिस्तानका राष्ट्रपतिले देशमा ‘नर्कको ढोका’ अर्थात् ‘गेटवे टू हेल’ निभाउने आदेश दिएका छन् । तुर्कमेनिस्तानको
कोरोना संक्रमितलाई होसमा ल्याउन भियग्रा दिएपछि…!
भनिन्छ कुनै बेला चमत्कार नै हुने गर्छ । त्यस्तै घटना बेलायतमा भएको छ ।बेलायतको गेन्सबरो